Iimpawu zetrout rainbow | Ngeentlanzi
Maria | | Amanzi abandayo e-aquarium
Namhlanje sifuna ukwabelana nawe iimpawu zomnyama trout, uhlobo lwe intlanzi zihlala zihlala kumanzi acocekileyo asentshona Melika.
Ubunzima bayo obuphakathi zii-3.60 kilos, ixesha lokuphila li-4 ukuya kwi-6 iminyaka. Ukutya kwayo kukutya kwaye ukuphakama kwayo kufikelela kumasentimitha angama-76.
Le trout intle Yinzalelwane yamachibi kunye nemilambo yeRoyy Mountain (Amantla Emelika). Ukutyhubela iminyaka le ntlanzi ibisaziswa kwihlabathi lonke ngenxa yokusetyenziswa kwayo kwimidlalo yokuloba kunye nenyama yayo enencasa. Uhlobo oluxabisekileyo kakhulu noluxabisekileyo.
Xa uyibona, ufumana isampulu ebabazekayo enemibala eya kwahluka ngokuxhomekeka kwindawo abahlala kuyo, ubudala babo kunye nendlela abazala ngayo. Owona mbala uxhaphakileyo luhlaza oluhlaza okwesibhakabhaka okanye oluhlaza otyheli kunye nomgca opinki kwicala ngalinye, isisu simhlophe kwaye sinamachaphaza amnyama kwinxalenye yasemqolo nakumaphiko ayo.
I-trout yomnyama sisizalwane salmon yosapho, kwaye njengale inokufikelela kubungakanani obukhulu. Nangona umndilili ufikelela kwiisentimitha ezingama-76, ezinye iisampulu ezinomlinganiso ongaphezulu kwe-1.20 yeemitha kwaye zinobunzima obungaphezulu kwe-24 kilos.
Indawo yokuhlala ayithandayo yimilambo, imilambo kunye namachibi anamanzi acwengileyo nabandayo., ngamanye amaxesha ashiya amanzi amatsha ade afike elwandle. Abantu abadala bahlala befuduka, ngelo xesha bafumana i-athomu yesilivere.
Batya izinambuzane, ii-crustaceans kunye neentlanzi ezincinci Okwangoku luhlobo olukhoyo, ngokubanzi, kwihlabathi liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Amanzi abandayo e-aquarium » Umvundla wemvula